Ukuphupha i-Ice Bear Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ibhere emhlophe, okanye ibhere emhlophe, yeyosapho lwebhere kwaye lelona rhamncwa likhulu emhlabeni elihlala emhlabeni. Ukuba ityiswe kakuhle, iya kuba nobunzima obungama-500 eekhilogram. Isalamane sayo esisondeleyo ibhere emdaka. Ibhere le-polar yinzalelwane yemimandla esemantla, ngoko ke lihlala kwikhephu elingunaphakade nakumkhenkce. Esi silwanyana simangalisayo sidlala indima ebalulekileyo kwiintsomi zama-Inuit ahlala apho. Ibhere elimhlophe linokubonwa rhoqo kwiidyasi zeengalo kunye neeflegi zamazwe aseNordic kwaye ezi ntlobo zihlala zifumaneka kwiimovie nakwiincwadi.
Akumangalisi ke ukuba ibhere linokuvela ngaphakathi el mundo yamaphupha. Ngokukodwa kuba unokufumana ibhere elimhlophe lihlala kwiindawo ezininzi zokugcina izilwanyana, kungenxa yoko abantu abaninzi bephupha ngamava akhe ngobusuku obulandelayo. Sesiphi isilwanyana esikhulu njengophawu lwephupha olunokuthetha, uya kufumanisa kwisicatshulwa esilandelayo:
1 Uphawu lwephupha «ibhere elimhlophe» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ibhere elimhlophe» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ibhere elimhlophe» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ibhere elimhlophe» - ukutolikwa ngokubanzi
Ibhere elimhlophe kwihlabathi lamaphupha ngamanye amaxesha libonisa ukuphoxeka kwi uthando phakathi. Ibhere elimhlophe linokubonisa ukungakhuseleki kubudlelwane phakathi kwabantu, ke ingxaki ayifuni ukuba neqabane.
Olunye utoliko lubona ibhere le-polar njengophawu lwe Abakhuphiswano okanye uthethe kakubi ngasemva kwakho. Umphuphi kufuneka acinge kwikamva elikufutshane ukuba ngubani omthembileyo. Umxholo wephupha kunye nezinye izilwanyana, abantu okanye izinto ezibonwe ephupheni zinika ubungqina bokubaluleka kwebhere emhlophe ephupheni.
Umbala omhlophe woboya bebhere emhlophe ubonakalisa ukungabi namandla ebusweni besithintelo esibonakala singenakoyiswa. Mhlawumbi udano olunamava lukhulu kangangokuba iphupha ngoku liziva lingenamandla kwaye alazi ukuba lingaqhubeka njani. Ezinye iisimboli ezinamava emaphupheni zibonisa indlela apha.
Ibhere elimnandi lomntwana ephupheni libonisa ukuba uxanduva olutsha ngokukhawuleza luya kuvela kubomi bephupha. Akunyanzelekanga ukuba ibe ngowakho umntwana, oko kunokuthetha isikhundla esitsha sobungcali.
Ukuba iphupha liceba ukuzingela ibhere kwihlabathi lamaphupha, liya kuzibeka emngciphekweni. Kule meko, umfanekiso wephupha sisilumkiso. Ukubulala ibhere emhlophe emva kokuzingela kubonisa ephupheni ukuba ungabaleka ingozi kwaye ubaleke "nolusu olusempilweni." Ibhere elimhlophe lifile lifanekisela ukulala Suerte uya kuba nayo, nokuba kusekho imiqobo ekufuneka uboyisile kwangaphambili. Impumelelo ithembisa ukuqhuba ngempumelelo ibhere elimhlophe ephupheni. Uphando lwamaphupha ngokuqinisekileyo lutolika ngokuqinisekileyo ibhere elingenabomi okanye uboya bebhere.
Ngokuchasene noko, ukuba ibhere emhlophe ileqa iphupha, kuya kufuneka aqokelele onke amandla okubaleka kwimeko enzima. Ukuba iphupha lihlaselwa libhere elimhlophe, liyasongela. ukonakalisa. Uhlaselo lweebhere ezimhlophe lujolise ekulumkiseni abo bachaphazelekayo ukuba bangazenzi ngokungakhathali kungekudala.
Uphawu lwephupha «ibhere elimhlophe» - ukutolikwa kwengqondo
Iibhere, ngakumbi ibhere emhlophe, zihlala zitolikwa njengengozi kutoliko lwengqondo lwamaphupha. Isizathu soku yingqele yokomfuziselo ebonakaliswa yibhere emhlophe. Oku kunika umfanekiso wephupha ngandlela thile ukubala kunye nemvakalelo yokubanda, enokusongela ubuthongo. Ke ngoko, umphuphi usoloko elumkiswa ukuba alumke xa ibhere elimhlophe lizibonakalisa kwilizwe lamaphupha.
Isazi ngengqondo uCarl Gustav Jung uguqulela ibhere elimhlophe eliphuphayo njengophawu lwemiba emibi ye ubuntu yokuphupha. Isenokuba malunga neyakho isini Mthetho. La malungu enza isoyikiso ekuphupheni kwaye olu loyiko luya kuphela kuphela xa umntu ophuphayo efunda ukwamkela eli cala limnyama.
Amaphupha ngale ntsingiselo aphupha ikakhulu ngabantu. Kwiphupha labasetyhini, lo mfanekiso uphupha usebenza njengesimemo sokumisela kwaye uphile ubomi bakho ngokwesondo ngokuthe kratya.
Amandla amakhulu kunye namandla e-polar bear atyhola nawo afuzisela oko ubuchule. Abantu abaninzi abaphuphayo banqwenela ukuba babe nawo la mandla obuchule babo xa bephupha ibhere elimhlophe. Nangona kunjalo, iphupha licebisa ukuba amandla apheleleyo ebhere emhlophe asetyenziswe ngononophelo nangononophelo.
Uphawu lwephupha «ibhere elimhlophe» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, ibhere le-polar lisetyenziswa njengophawu lwe ukomelela ngokomoya y Amandla Itolikiwe